Dhulkaygu Gorgortan Ma galo. | Xeegonews.com
Dhulkaygu Gorgortan Ma galo.
Anigu waan yaabanhay waxaan maalinkasta shaashadaha ama websiteyada ka arkaa hadalo lagu hadaaqayo ay ka mid tahay Saylac anagaa iska leh, damacas qaawan ayaan arkaa, ma inagaa waalan mise cadan ayaa laga heesayaa?
Lakiin waa wax aan inagu iskukeenay, inaga ayaa soo cidlaynay dhulkeena, inaga ayaa dayacnay sidaa awadeed waa in yar iyo weynba loo kacaa dhulkeena, sidaan u difaacan lahayn sidaan u dhisan lahayn. Dad ayaa usoo dhintay dhulkan ma dhayal ayaan ku ilownay dadkaas shalay ayey ahayd markuu shihiiday Jimcaale Ilaahay ha unaxariistee.Waxaa khalad ah in aan ka maqanahay Gabilay golaha deegaanka waxaanan ku tilmaamayaa talo xumo.
Waxaan kaloon maqlaa reer Boramow Borama kuguma haysto waa wax inaga la inaga arkay waayo ilaahay dhul ayuu inagu manaystay laakiin waan soo wada cidlaynay waa waxa manta la inoogu leeyahay reer Boramow Borama kuguma haysto. Inagaa Borama iskusoo koobnay. Awey magalooyinkeenii kale maxaa inoo diiday. Horta mayna jirin dad ka damqada kalmadahaas ?
Aawey aqoonyahanadii dalkan? Awey dadkii u maqnaa dalkan? Su’aalhaas ayaan isweydiiyaa waxaas oo dhan yaa iiga jawaabaya?
Qalinka in aan qaato waxaa igu kalifay waxaan ka adkaysan kariwayey waxaas aan arkayo maalinkasta ama aan maqlayo kaliday uunmaaha ee waa dareen dumarka Samaroon ilawada qabaan midkasta oonaga mid ihi wey isweydiisaa.Waxaa iga talo ah Golaha deegaanka ee kasoo baxay Saylac waa in ay ogaadan inay dad doorteen waajib ay tahayna in ay kasoo baxan wixii loo igmaday Xukumadana waxaan kula talinaya in ay kadaayaan faragalinta qaawan ee ay kuhayaan saylac. Waa in ayna ula dhaqmin si kaduwan Degmooyinka kale.